ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): လိုက်နာကြပါ ( From Fat Punk Blog )
ဒီစာသားတွေက Fat Punk ဘလော့ခ်ကနေ ယူထားတာပါ.. သူရေးထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးတွေကို အရမ်းသဘောကျလို့ လင်းဘလော့ခ်မှာ ဖော်ပြခြင်းပါ …….. ( ဘလော့ခ်ဘုရင်မကြီး mayvelous ပြောသလိုမျိုး ခိုးယူခြင်းမဟုတ်ပါ … အပြည့်အစုံဖော်ပြထားပါသည် )
“တပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသူ... တို့ရန်သူ”
မဖြိုခွဲပဲ တစ်တပ်လုံး အပျောက်ရှင်းပါရန်...
“ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး... အဆိုးမြင် ၀ါဒီများအား ဆန့်ကျင်ကြ”
ပြည်တွင်းခွစား လွှစာမှုန့်များကို အရင်ရှင်းလင်းကြပါရန်...
“တပ်မတော်သာ အမိ... တပ်မတော်သာ အဖ”
အမိဆိုသောကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ဂေးများလဲ ရှိလေ၏။ လေးစားကြပါရန်...
သို့မဟုတ်၊ တပ်မတော်သာ မိထွေး၊ တပ်မတော်သာ ပထွေးဆိုလဲရ၏။
“တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်”
ယခု ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အငတ်ခံ၍ တပ်မတော်ကို ကျွေးမွေးနေခြင်းသည် တိုင်းပြည်အင်အားရှိရန်သာ ဖြစ်လေသည်။ ဂုဏ်ယူကြပါကုန်...
ဖယောင်းတိုင်စက်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ခေတ်ကျော်လွှားကြမည်။
ကိုယ်တိုင် ဘယ်တုန်းက သဘောထားလိုက်မှန်း မသိပါပဲ ဘယ်သူရေးလိုက်မှန်း မသိသည့်စာမို့ ဘာပြောရမှန်းမသိပါ။
နှစ်ကြာလာလျှင် မြန်မာစကား၌ မင်္ဂလာပါဆိုသည်မှာ ပြန်ပါဟု နှုတ်ဆက်သည့် စကား ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်များ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရနိုင်ပါပြီ။ (မိန်းကလေးများသာ...)
ပညာမြင့်ရန် တပ်ထဲဝင်ပါ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တုတ်ခိုင်ရေးအသင်း (xxx ဖိုရမ်မှ xxx၏ အသုံးအနှုန်း) သို့ဝင်ပါ။ ပညာတော်သင် အစီအစဉ်ရှိသည်။ (ရုရှား၊ မြောက်ကိုရီးယား)
“နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော် တိုးတက်ရေးကို စွက်ဖက် နှောက်ရှက်သော ပြည်ပနိုင်ငံများအား ဆန့်ကျင်ကြ။”
(တရုတ်မပါ၊ ထိုင်းမပါ၊ အိန္ဒိယ မပါ၊ မြောက်ကိုရီးယား မပါ)
“နိုင်ငံတော်၏ မတည်မငြိမ်၊ အဖက်ဖက်က ယိုရွင်းလာသည့် အခြေအနေများကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် တပ်မတော်မှ (မလွဲမရှောင်သာပဲ) နိုင်ငံတော်အာဏာကို လက်ခံလိုက်ရသည်။”
“သစ်တစ်ပင်ခုတ် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်”
တစ်မျိုးသားလုံး ညီညီညာညာ လာခံကြပါ။
“နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ထိပါး နှောင့်ရှက်လာခဲ့သည်ရှိသော် တပ်မတော်သည် (သေနတ်ကို) မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ပါ။”
မြေကြီးကိုသာ အောက်စိုက်ပစ်မည်။ (သို့မဟုတ်...)
သေနတ်များ စုတ်သောကြောင့် ထောင်ပစ်လျှင် ကြည်မထွက်ပါ။
“နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ထိပါး နှောင့်ရှက်လာခဲ့သည်ရှိသော်”
နောက်ပိုင်း ထပ်မပစ်တော့သည်မှာ အထက်ပါ စာကြောင်းအရ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်သေပြီး ကိုယ့်တပ်ကိုယ် ပြန်ပစ်ရမည့် သဘောရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တိုးတက်ခေတ်မှီနိုင်ငံသို့ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ပြီး ချီတက်စို့
( ဒီ၂ခုက ကွန်မန့်ပေးထားတာကို ပြန်ရေးပေးခြင်းပါ )
ဟား ဟား ဟား ရီရတာ အူကိုလိမ့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ညီမရေ…. အားလုံးကသူငယ်ချင်းတွေပါကွယ့်။ နားလည်မှုလွဲကြတာပါ။ ခင်ခင်မင်မင်ပေါ့နော့်။
ဘလော့ခ်ဘုရင်မကြီး mayvelous ပြောသလိုမျိုး ခိုးယူခြင်းမဟုတ်ပါ … အပြည့်အစုံဖော်ပြထားပါသည်
ဟားဟားဟား ရပါတယ်အမရာ ကျနော်တို့က စိတ်မပုပ်ပါဘူး။
ဘလော့ ဘု . . . ရင် . . . မကြီး ဆိုတော့ ဘလော့ ဘု . . . ရင် . . . ထီးကြီးကကော ဘယ်သူပါလဲ ခင်ဗျာ။
ဘလော့ခ်ဘုရင်ကြီးလား ဟိဟိ ဘုရင်မကြီးကိုသွားမေးနော် .. လင်းလက်က သာမန်အညတရလေးဆိုတော့ ..........
ဘလော့ဘု၇င် ထီးကြီးက NLS နေ မှာပေါ့..သူတို့ နှစ် ယောက် ပဲ စီးဝါးကိုက် နေ ကြ တယ်။
(ဘဘတို့ရဲ့အိမ်တွေများ နန်းတော်ကြီးကတောင် အရှုံးပေးရတယ်)
ကြားပြီးပြီလား၊ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ တန် မင်ဂလာဆောင်။ သန်းရွှေ သမီး။ လူတွေသာ မီးမလာ၊ ရေပြတ် နေတာ။ သူတို့ က သိပ်ယုတ်မာနေကြတာ။
ဟုတ်လား သူ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်တာ သိတောင်မသိလိုက်ဘူး အလုပ်များနေတာနဲ့… လူတွေသာ သူတောင်းစား သာသာဘ၀ကိုရောက်ကြတယ်.. သူတို့က အဲဒီလို မင်္ဂလာဆောင်နိုင်သေးတယ်.. တောက် ကမ္ဘာချန်ပီယံ လူယုတ်မာများဘွဲ့ပေးအပ်ရမယ်..
haha.. i'm not gud at myanmar font..so lemme just type in english font..
Shi tay yin htet pay par ohn.. :D
I would like to add some sentences here. Sorry, I can't use myanmar fonts. So, let me add in Burglish.
"Khit Me Phwunt Phyo Naing Ngan Si Mee Chit Kaing Pyi Chi Tat Myi"
"Toe Tat Khit Me Naing Ngan Toh Pha Yaung Taing Kaing Pyi Chit Tat Soh"
When I am reading this post, All i am doing is laughing out loud, I like all of your posts. Thank youalot.